Nhau - Chinhu chakakosha chinokanganisa mutengo wefoni mbozhanhare jammer
Icho chinotora danho chinokanganisa mutengo wefoni mbozhanhare jammer
Munguva yese yapfuura chiratidzo chekudzivirira mapurojekiti, chikamu chinonyatsoratidza kukosha ndiko kudiwa chaiko kwemutengi, ndiko kuti, icho chinhu chinonyatso tarisa mutengo ndiko kudiwa kwemutengi. Semuenzaniso, munzvimbo yemukati ye50m * 50m, mutengo wezviteshi zvepa base zvisina kushandiswa zvichave zvakaderera pane izvo zvezviteshi zvepasi; mutengo weimba yakavhurika isina pekugara unenge wakaderera pane iwo wakadzivirirwa; Maawa makumi maviri nemaviri asina kuvhiringidzwa akazara-bhendi kudzivirirwa achadhura pane epakati Mutengo wekudzivirira mune mamwe ma frequency band wakaderera; mutengo wekusanzwisisika kwekuyedzwa kudzivirirwa (ingori chete nzvimbo inodzivirirwa) yakadzika pane iya yekudzivirira chaiyo; etc.
Mune chirongwa, zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, marongero enzvimbo uye nesimba redhiyo chiratidzo, inodzivirira sisitimu inowanzo kuvakwa nenzira yekudzivirira host + antenna kugovera. Iyi hunyanzvi uye hunyanzvi hwakavimbika hwetekinoroji mumunda unodzivirira. Iyo yekudzivirira nzira inosarudzwa nechengetedzo agency ndeyechokwadi kupfuura chinhu chimwe chete, uye mutengo wayo unosiyana nehukuru hwenzvimbo yekudzivirira uye neiyo-saiti nharaunda.
Mumhuri, vamwe vabereki vanonetsekana kuti vana vavo vanozopindwa muropa nenhare mbozha uye vanofunga zvekutenga jammers, uye vanowanzo tenga muchivande jammers dzemazana ezviuru zvemadhora. Midziyo iyi inokanganisa mashandisirwo enharembozha munharaunda. Vashandi vatatu vakuru vachaferefeta mushure mekugamuchira chichemo. Kana vakawanikwa, vanogona kutongerwa zvirango zvisiri pamutemo.
Naizvozvo, icho chinosarudza mumutengo wefoni mbozhanhare jammers ndiko kudiwa kwevashandisi. Izvo zvinodiwa zvekudzivirira zvakakwirira uye mutengo wakakwira, uye mutengo wakaderera unodzikiswa. Nekudaro, iyo yekutanga chinangwa chekudzivirira ndechekuzadzisa iko kuitika pasina kukanganisa wechitatu bato, saka yakanyanya kukwana dziviriro haizove yakachipa zvakanyanya. Mutemo wekukosha unoraira